PHOTOS ။ စိန့်ဂျာမိန်းနှင့်အတူ Deauville 2019 ၏ပွဲတော်ဖွင့်လှစ်: Closer.fr အဲဒီမှာပဲ! - Tele RELAY တစ်ခု
မူလစာမျက်နှာ » လူတွေ & ပုံစံမျိုးမှာနေထိုင် "PHOTOS ။ စိန့်ဂျာမိန်းနှင့်အတူ Deauville 2019 ၏ပွဲတော်ဖွင့်လှစ်: Closer.fr အဲဒီမှာပဲ!
PHOTOS ။ စိန့်ဂျာမိန်းနှင့်အတူ Deauville 2019 ၏ပွဲတော်ဖွင့်လှစ်: Closer.fr အဲဒီမှာပဲ!
အဆိုပါ Deauville အမေရိကန်ရုပ်ရှင်ပွဲတော်၏45èmeထုတ်ဝေ6စက်တင်ဘာလအပေါ်ဖြန့်ချိခြင်း, အခါသမယများအတွက်ခဲ့ပါတယ်, Closer.fr အပေါ်ကိုရှာဖွေတွေ့ရှိခဲ့သညျ! ပီယပ် Brosnan, ကက်သရင်း Deneuve, Orelsan... ထုတ်ပြန်ကြေညာခဲ့သည်နာမည်ကြီးတွေများ၏စာရင်းကိုအထင်ကြီးသည်, ညနေပိုင်းတွင်တစ်ပျံအပေါ် ... ဒါမှမဟုတ်မိုးရွာရွာများတွင်စတင်! သို့သော်အနည်းငယ်ကအဘယ်အရာကိုပေါက်နှင့်လေတိုက်, နာမည်ကြီးတွေဖွင့်ပွဲအခမ်းအနားများအတွက် Deauville အပြည်ပြည်ဆိုင်ရာရေးစင်တာအတွင်း၌ဦးတည်ရှေ့တော်၌ထိုအနီရောင်ကော်ဇောပေါ်မှာရှိုးဖို့အချိန်ကိုယူ။
အတူစတင်ကျနော်တို့မိုးသည်းထန်စွာမှကုသခံခဲ့ရသည်! တကယ်တော့, ပီယပ် Brosnan, လူတစ်ဦးအတွက် 007 ဂုဏ်အသရေတစ်ဆုချီးမြှင့်ခွင့်ပေးခဲ့သည်။ မိမိအလေးဆယ်နှစ်အသက်မွေးဝမ်းကျောင်းကိုဂုဏ်ပြုတဲ့နှင့်သူ၏ filmography အထင်ကြီးကြောင်းတွေ့ရှိရန်နည်းလမ်း။ ရုပ်ရှင်၏ထုတ်ပြန်မှုကိုအောက်ပါ New York မှာတစ်ဦးကမိုးရွာသောနေ့၌ de ဒါရိုက်တာ Woody Allen (ထိုပွဲတော်ပျက်ကွက် ... ), ညနေပိုင်းတွင်အဆိုပါ chic အတွက် Gala ညစာအတူဆက်လက် ကာစီနို Barrierအရာမဖြစ်မီသင်တန်းနည်းပြ Daniela Lumbroso အရှည်မှာပရိသတ်တွေနဲ့အတူ selfies ယူခဲ့ပါတယ်။ ငါတို့အဘို့အကမဟုတ်ဘဲတူသောအမည်များကိုတွဲပြီးစားသောက်ရန်အခွင့်အလမ်းခဲ့ Claude Lelouch, ကက်သရင်း Deneuve သို့မဟုတ် ဂျိမ်းစ်ဘွန်း။ အတန်း!
Killer ညဉ့်အဆုံးကြယ်အားထုတ်ထားပါတယ် Cut
အဆိုပါ Gala ပြီးနောက် ကာစီနို Barrier ကိုလက်စသတ်, ပွဲကျင်းပသည့် chic ဗီလာ Hopscotch အတွက်အနီးအနားဆက်ပြောသည်။ မိမိအ DJ သမားအတွက် Killer Cut နှင့်ကော့တေးအမှတ်တံဆိပ်ရင်း စိန့်ဂျာမိန်း* နာမည်ကြီးတွေနဲ့အခြားဧည့်သည်များကခုန်ကြမ်းပြင်မချန်မထားခဲ့ပါဘူး။ သွ Trapenardအန္န Mouglalis, Orelsanအဲလစ်Belaïdiသို့မဟုတ် Pascal Praud ညဉ့်မှတဆင့်အားထုတ်။
စနေနေ့နံနက်နာမည်ကြီးတွေများအတွက်တိတ်တိတ်ဆိတ်ဆိတ်ဖြစ်ခဲ့သည်။ ယခင်နေ့ကမိမိအခှနျကိုဆကပေးအပ်စိတ်လှုပ်ရှားမှုမှပြန်လည်ထူထောင်ပီယပ် Brosnan, မှ9နံနက်မှငြိမ်းချမ်းရေးအတွက်မနက်စာကိုချီးမြှင့်ခဲ့သည် တော်ဝင် Barrier။ နောက်ပိုင်းတွင်နံနက်ယံ၌, သွ Trapenard နေရောင်-Norman အနည်းငယ်ရောင်ခြည်ကိုခံစားသွားကြဖို့ဆုံးဖြတ်ခဲ့ပါတယ်နှင့်ပျဉ်ပြားဆီသို့ဦးတည်နေတဲ့ကုမ္ပဏီတခုခြေလှမ်းနှင့်အတူသွားလာ၏။
မိမိအပရိတ်သတ်များနှင့်အတူထိပ်ပေါ်မှာ Gaspard Ulliel
ဒါပေမယ့်လှပတဲ့ကမ္ဘာကြီးနော်မန်အပေါ်ဟိုတယ်မှာတကယ်ဖြစ်ခဲ့သည်: ဤစပျစ်သီးကို 2019 ပွဲတော်များ၏ဂျူရီ, La Belle Epoque မှာ feasted ။ ကက်သရင်း Deneuve ၏ရေးစပ်တစ်ဦးအထင်ကြီးtablée, Gaspard Ulliel, အန္န Mouglalis, အ Orelsan အဲလစ်Belaïdi။ ဘုရင်မကြီးကက်သရင်း, လိုက်ပို့, ငြိမ်းချမ်းရေးအတွက်ဟိုတယ်လော်ဘီမှပြန်တဟုန်တည်းပြေးလျှင်, Gaspard Ulliel ကသူ့ပရိသတ်တွေနဲ့အတူရှိုးဖို့အချိန်ကိုယူပြီးတာနဲ့ကိုလက်စသတ်နေ့လယ်စာသူ့ကိုနှုတ်ဆက်, ပင်အနည်းငယ်စကားများဖလှယ်ဆီသို့ရောက် လာ. , စောင့်ဆိုင်းနေခဲ့ကြသောမိမိရဲဘော်များကမှာအော်ခံရဖို့အရွက်! အဆိုပါပွဲတော်ပျော်မွေ့ရန်, ပိတ်ဖို့မည်သည့်အခါဒါပေမယ့်သူ 15 စက်တင်ဘာလ၏ညဦးတိုင်အောင်ကြောင့်ကြောက်ရွံ့မှုကိုပြေ!
* (အရက်အလွဲသုံးစားမှုနျြးမာရေးအတှကျအန္တရာယ်ရှိသည်, ဖြည့်ညှင်းအတွက်လောင်)
© Olivier Vigerie / စိန့်ဂျာမိန်း
ကက်သရင်း Deneuve Deauville အတွက်6စက်တင်ဘာလ 2019
Green Day, Boy ထဲက Fall, Weezer Oracle ကမှစည်းလုံးညီညွတ် Park ကစတငျရ - လူတွေ
Meghan Markle အလွန်ထူးဆန်းတဲ့ပြဿနာအကြောင်းကိုသတိပေးခဲ့သည်။ အမေရိကန်ကိုဖွင့်ရွှေ့ဖို့ဆုံးဖြတ်ချက် - & # 039; အဆိုပါ optical & # 039 စဉ်းစား;
Aigle Azur: အမိုးကုပ်စက်ဝိုင်းပေါ်ထွက်လာပေမယ့်ဆင်းသက် undefined ဖြစ်နေဆဲ - JeuneAfrique.com
ဗေဒင်: ဒီနေရာမှာတစ်ဦးချင်းစီရာသီခွင်နိမိတ်လက္ခဏာကို (သူပြသလိုမတဦးတည်း) ၏လြှို့ဝှကျအခြမ်းများမှာ - ကျန်းမာရေး PLUS MAG
ခြေလျင် OM - OM: အဘယ်သူမျှမ CdL Nabil Djellit Marseille နှင့်သူ၏စံချိန် ridicules! - ခြေလျင် 01